June 26, 2021 - Hargeele - Wararka Somali State
Xulka Italy oo is keenay wareegga siddeed-dhammaadka tartanka Euro 2020 kulan uu 120 daqiiqo la raftay Austria
Cayaaraha June 26, 2021
(London) 26 Juun 2021. Waxaa goor soo idlaaday kulan ka tirsan wareegga 16-ka tartanka qarammada qaaradda Yurub kaasoo dhex maray xulalka Italy iyo Austria oo garoonka ku hardamay 120 daqiiqo. Ciyaarta qaybteedii hore ayaa ku dhammaatay barbarro 0-0, balse xulka Taliyaaniga ayaa helay fursado qaali ah kuwaasoo nasiib darro ay beerdareeyeen xiddigaha Azzuri. Markii dib […]Sii akhriso
Xulka Denmark oo u gudbay wareegga Siddeeda ee Koobka EURO 2020 kaddib markii uu guul ka gaaray dhigiisa Wales… +SAWIRRO
(Amsterdam) 26 Juun 2021. Xulka Denmark ayaa u gudbay wareega Siddeeda ee Koobka EURO 2020 kaddib uu guul kaga gaaray dhigiisa Wales 0-4, kulankii bug-baxda wareega 16-ka ee tartanka qarammada qaaradda Yurub Euro 2020. Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 0-1 uu ku hoggaaminayay xulka qaranka Denmark. Daqiiqadii 27-aad xulka qaranka Denmark ayaa hoggaanka […]Sii akhriso
Somali kills three in ‘brutal’ Germany knife attack – Arab News
Somali News June 26, 2021
Somali kills three in ‘brutal’ Germany knife attack Arab NewsSii akhriso
MADAXWEYNE FARMAAJO OO UBAX MAAMUUS AH DHIGAY TAALLADA DHAGAX-TUUR+SAWIRRO
Soomaaliya June 26, 2021
La wadaag cid kale Facebook Messenger WhatsApp Twitter LinkedIn Muqdisho.(SONNA):– Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maamuusaya halgameyaashii Soomaaliyeed ee naftooda iyo dhiiggooda u huray Xorriyadda Gobollada Waqooyi iyo guud ahaan halgankii gobannimo doonka ee Dalka ayaa ubax dhigay taallada Dhagax-tuur ee magaalada Sii akhriso
Shan Weeraryahan oo ay macquul tahay inay Kooxda Juventus u buuxiyaan booska uu banneeyo Cristiano Ronaldo
(Turin) 26 Juun 2021. Kooxda kubadda cagta Juventus ayaa la soo warinayaa inay isku diyaarinayso inay noolaato Cristiano Ronaldo la’aantiis kaasoo lagu wado inuu ka tago. Haddaba waxaa la shaaciyey Shan weeraryahan oo midkood uu kooxda Marwada duqda ah u buuxin doono booska uu ka baxo Cristiano Ronald oo isku diyaarianya inuu baxo. Waqtigii Cristiano […]Sii akhriso
Sidee ayey u muuqanaysaa SHAXDA Kooxda Manchester City haddii ay la soo saxiixato Harry Kane & Jack Grealish?
(Manchester) 26 Juun 2021. Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa la soo warinayaa inay doonayso inay gacanta ku soo dhigto labada ciyaaryahan ee Harry Kane iyo Jack Grealish. Haddaba su’aasha la isweydiinayo ayaa ah sidee ayay u muuqanaysaa Shaxda Kooxda kubadda cagta Manchester City haddii ay la soo saxiixato Harry Kane iyo Jack Grealish labadaba? […]Sii akhriso
Tababare Pep Guardiola oo doonaya inuu Man City keensado daafac ka tirsan Kooxda Chelsea
(Manchester) 26 Juun 2021. Tababare Pep Guardiola ayaa la soo warinayaa inuu doonayo in kooxda Manchester City uu keensado daafac ka tirsan naadiga Chelsea ee ay ka wada dhisan yihiin dalka Ingiriiska. Warsidaha The Athletic ayaa warinaya in Guardiola uu kooxda Chelsea ka doonayo daafaceeda Reece James, isla markaana uu rabo inuu keeno Manchester City […]Sii akhriso
Maxaa ka jira in Macallin Gareth Southgate uu qandaraaska u kordhinayo xulka qaranka England?
(London) 26 Juun 2021. Warar soo baxaya ayaa looga hadlay haddii macallin Gareth Southgate uu qandaraaska u kordhinayo xulkiisa qaranka England ee haatan taagan wareegga 16-ka Euro 2020. Tababare Gareth Southgate ayaa la soo warinayaa inuu qarka u saaran yahay inuu qandaraaska u kordhiyo xulkiisa qaranka England. Shabakadda ciyaaraha ee 90min ayaa warinaysa in xiriirka Sii akhriso
Kooxda Barcelona oo bartilmaameedsanaysa xiddig ka tirsan Chelsea & Inter Milan oo…
(Barcelona) 26 Juun 2021. Sida wararku ay sheegayaan Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa bartilmaameed ka dhiganaysa saxiixa xiddig daafaca uga ciyaara naadiga Chelsea. Jariiradda Mundo Deportivo ayaa warinaysa in Barcelona ay bartilmaameed ka dhigatay daafaca dadabka bidix ee Kooxda Chelsea, Marcos Alonso. Kooxda kubadda cagta Inter Milan ee dalka Talyaaniga ayaa sidoo Sii akhriso
Dabbaal-degyadii maalmaha Xoriyadda oo weli si weyn uga socda dalka+Sawirro
La wadaag cid kale Facebook Messenger WhatsApp Twitter LinkedIn Muqdisho.(SONNA):- Dabbaal-degyadii maalmaha Xoriyadda ayaa weli si weyn uga socda guud ahaan Dalka gaar ahaanna Caasimadda Muqdisho, Wasiirka Warfaafinta ayaa booqday taalada Dhagax-tuur halkaas oo weli muwaadiniinta Soomaaliyeed kasii wadaan Dabaal dega maalmaha Xoriyadda Wasiiirka ayaa yiri. “Halkani waa Sii akhriso